Zimbabwe Archives - ICC Cricket Schedule
Mohit Tiwari - March 25, 2021
Pakistan vs Zimbabwe: Babar’s expeditious 82 assists hosts to lead 6 wicket victory in 1st T20I. Hosts defeated Zimbabwe in the first T20I. Pakistan vs Zimbabwe: Babar’s expeditious 82 assists hosts to lead 6 wicket victory in 1st T20I. Match Highlights(Pakistan vs Zimbabwe): Pakistani skipper’s 82 runs important knock lead the side to a comfortable win against Zimbabwe in the 1st...
Blessing Muzarabani Five-for helped Zimbabwe pull out a thriller in their favor. Pakistan vs Zimbabwe: 3rd ODI, Blessing Muzarabani Five-for helped Zimbabwe pull out a thriller in their favor. Rawalpindi: Blessing’s Five-for in the second innings of the game and two more wickets in the Super Over helped Zimbabwe pull out a thriller in their favor. The last ODI between...
Pakistan vs Zimbabwe: Afridi’s fifer sailed Pakistanis to Victory in the 1st ODI
Pakistan vs Zimbabwe: Afirdi’s fiver sailed Pakistanis to Victory in the 1st ODI. Pakistan vs Zimbabwe: Pakistan defeats Zimabawe by26 runs. Rawalpindi(Pakistan): Pakistan started their World Cup campaign for the 2023 ODI Word Cup on 30th October against Zimbabwe. Pakistan and Zimbabwe will play 3 matches ODI series in Pakistan. The first match of the series was played on 30th...